Maxamed Cali Kalaay oo lagu aasay Magaaladii uu ku dhashay ee Louisville (Daawo Sawirada).. - iftineducation.com
iftineducation.com – Allaha u naxariistee Maxamed Cali Kalaay, ayaa Jimcihii waxaa aas wayn loogu sameeyay Magaalada Louisville ee dalka Mareykanka. Louisville waa Magaaladii uu ku dhashay marxuumka.
Feeryahanka miisaanka culus dunida, ayaa waxaa aaskiisa ka qaybgalay dadyow aaminsan diimo kala duwan, kuwaa oo isku waafaqsanaa ka qaybgalka aaskiisa. Caalamku waxaa uu ninkaasi u arkaayay mid midayn kara dadka haysta diimaha kala duwan.
Dadka ka qaybgalay aaska feeryahanka u dhashay dalka Mareykanka, ayaa waxaa tiradoodu lagu sheegay 15 kun oo qof, waxayna qaarkood ka soo safreen dalal ku kala yaala Qaaradaha Caalamka, bal si ay uga qayb qaataan aaskiisan.
Dadka bulshada dhexdeeda magaca ku leh ee ka qaybgalay aaskan, ayaa waxa ka mid ah xidiga kubadda cagta dalka Ingiriiska u dhashay ee David Beckham, jilaga madowg Mareykanka ee Will Smith, jilaaga caanka ah ee Arnold Schwarzenegger, feeryahanka Mike Tyson iyo qaar kaloo fara-badan.
Sidoo kale madax ka kala socotay dalalka dunida, ayaa ka qaybgalay Salaaddii Janaasada ee Khamiistii loogu sameeyay Magaaladaasi, qaarkoodna waxayba goobjoog ka ahaayeen aaskiisa.
Madaxweynaha Turkiga iyo Boqorka Jordan oo ka mid ahaa madaxdii ka qaybgashay Salaadda Janaasada ee feeryahankan, ayaan iyagu ka qaybgelin aaskiisii, ka dib markii la sheegay in laga saaray liiska dadkii loogu talla-galay in ay khudbadaha ka jeediyan aaska.
Bill Clinton, Madaxweynihii hore ee Mareykanka oo khudbad ka jeediyay aaska, ayaa Maxamed Cali Kalaay ku tilmaamay nin xor ah, isla-markaana ku dhegan wixii uu aaminsanaa.
Lonnie Ali oo ah xaaskii Maxamed Cali Kalaay, ayaa sheegtay in noloshiisii ay wax badan ka kororsatay, iyadoona dadka dib u xusuusisay taariikhdiisii.